Maxaad ka ogtahay sida baraha bulshada ay u sumcad dili karaan ganacsigaaga? | Baahin Media
Maxaad ka ogtahay sida baraha bulshada ay u sumcad dili karaan ganacsigaaga?
Haddii ay ahaan lahayd mid ka timid dadka internetka jabsada amaba qof macaamiil ah oo aan qanacsanayn amaba jawaab celin ka dhalatay qoraal aad ku baahisay baraha bulshada ,ayaa daqiiqado gudahood ku dhaawici karo sumcadda iyo magaca ganacsigaaga.
“Baraha bulshada ayaa ah halista kowaad ee dhaawici karta sumacadda shirkaddaada,” waxaa sidaasi sheegay Pete Knott, oo ah khabiir ka talabixiya arrimaha baraha bulshada.
“Haddii aan si dhab ah loo qaadan waxa ay si toos u saamaynaysaa shirkaddaada dhaqaala ahaan iyo dhaqan ahaanba”ayuu intaa ku daray.
Wararka been-abuurka ah ayaa ah mid ka mid ah caqabadaha- inkastoo ay shirkadaha Facebook iyo Twitter ay leeyihiin mashiino xanniba.
Lahaanshaha sawirkaRACHEL HELFAND GIUSEPPI
Image captionIlia Kolochenko
Bishii May, tusaale ahaan, saamiyada bangiga dalka UK ee Metro Bank ayaa waxaa soo gaaray khasaaro dhan 11% ka dib markii warar been abuur ah lagu baahiyay baraha bulshada taasi oo ah in uu bangiga ay soo wajahday dhibaato dhaqaale.
Sida uu sheegayo Ilia Kolochenko oo ka tirsan shirkadda dhanka ammaanka internetka ee fadhigeedu yahay Geneva-cawaaqibka arrintamahan ka dhalan kara ayaa ah mid si aad ah u xun.
“Dadka jabsada baraha internetka ayaa dhawaac wayn gaysan kara haddii ay helaan qaab ay baraha bulshada ugu baahin karaan wararka been-abuurka ah,” ayuu yiri Mr Ilia.
“Bal ka waran haddii inta ay qabsadaan cinwaanada BBC ay ku soo qoraan sheeko ku saabsan in Iiraan ay riday Bambaano Niyukleer ah”, ayuu intaa ku daray.
“Saamaynta ay arrintaasi yeelanayso waxa ay noqon kartaa mid wax baa’bisa.”ayuu yiri.
Baraha bulshada ma aha oo kali ah waxyaabaha aan runta ahayn ee dhaawaca u gaysan kara sumcadda magaca ganacsigaaga, maraarka qaar runta ayaa xitaa waxyeello gaysan karta.
Lahaanshaha sawirkaLOPA GHOSH
Image captionLopa Ghosh
Sanadkii 2016, shirkadda Samsung ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha suuqooda nus bilyan doolar ka dib markii madaxa shirkadda Tesla, Elon Musk uu bartiisa tweetarka ku soo qoray in shirkadda ay kala shaqaynayso shirkadda kale ee Panasonic sidii loo soo saari lahaa gaari ku shaqeeya koronto.
Haddii aadan si fiican uga fiirsan mararka qaar qoraalladaada ayaa waxay sababi karaan dhibaatooyiin.
Tusaale ahaan sidii horraantii sanadkan ku dhacday bangiga Mareykanka laga leeyahay ee Chase ka dib markii lagu eedeeyay “in aysan xishoon”. Arrintan ayaa ka dambaysay ka dib markii uu bangiga soo daabacay qoraal faraya macaamiisha aysan Sanaadiiqdooda bangiyada aysan lacagta ugu jirin ay lacag ku shubtaan si ay uga hortagaan in ay tagaasi inta ay qaataan ayna sii iibsadaan kafee.
Magacaaga dhabta ah oo la xado
Khatarada kale waxaa ka mid dadka xada ama qaata magaca ganacsigaaga ee ku been abuurta.
“Dambiilayaasha hal-abuurka leh ayaa waxay si xun u adeegsanayaan magacyada shirkadaha waawayn si ay dhac u gaystaan iyaga oo baraha bulshada adeegsanaya ,” Mr Kolochenko ayuu yiri.
“Tusaale ahaan waxay magaca ‘Amazon India Support’ ku saamaysanayaan cinwaan Twitter ah islamarkaana macaamiisha soo waca waxay ku dalbanayaan in ay lacagta bixiyaan.”
Xitaa qoraallada macaamiisha aan la aqoon ayaa waxay sababi karaan dhibaato haddii dadka kale ee baraha bulshada ay sii baahiyaan.
‘Qorshaynta waa muhim’
Lahaanshaha sawirkaMASHA MAKSIMAVA
Image captionMasha Maksimava
Masha Maksimava, oo ah ku xigeenka madaxa shirkadda la socodka baraha bulshada ee Awario ayaa rumaysan in jawaabaha laga bixiyo tabashooyiinka ay tahay mid maareyn u baahan .
“Waxaa furo u ah maareynta dhaliilaha in si dhaqso ah looga jawaab bixiyo si looga hortago in howsha ay sii murugto.” Ayay tiri.
Waxaa ay qabtaa in loo baahan yahay in si wanaagsan la isu diyaariyo.
“Qorshaynta waaa muhim,” ayey tiri Lopa Ghosh, oo iyaduna ah khabiir dhanka xiriirka dadwaynaha ah.
Waxaa sidoo kale muhim ah in aysan qofka xamaasad qaadin.
“Ma aha in aad ku booddo qoraal kasta oo xun oo la soo dhigo barta Tweetarka,” ayay tiri Ms Twohill.
“Mararka qaar waxaa wanaagsan in wax jawaab ah aan la bixin si looga hortago dhibaato sabab la’aan ah.” ayay intaa ku dartay
Lahaanshaha sawirkaCLAIRE TWOHILL
Image captionClaire Twohill
“Baraha bulshada ayaa ah goob wanaagsan oo dib loogu dhisi karo sumcadda,” ayuu yiri Mr Knott.
“Sidaasi daraadeed ka fikir qaabkii aad uga jawaab bixin lahayd dhibaatooyiinka aadna ugu salayn lahayd qiyamka shirkaddaada.
Ficillada shaqaaalaha ayaa ah mid ka mid ah waxayabaha ugu wayn ee cawaaqibka xun uu ka dhalankaro.
Tusaale ahaan Burcadda internetka ayaa waxay isticmaalaan macluumaad ay ka soo minguuriyeen cinwaanada shaqaalaha si ay galan-gal ugu yeeshaan shirkadda.
Richard Horne, waa khabiir dhanka ammaanka internetka waxa uuna leeyahay: “Dadka waxay ku baahiyaan baraha bulshada macluumaad badan oo iyaga quseeya.
“Sidaasi daraadeed dadka weerarada geysta waxay eegayaan macluumaadka” ayuu yiri.
“Waa qaab ay aad u badan tahay in saaamayn loogu yeesho nidaamka shirkadaha”, ayuu intaa ku daray.
Lambarrada sirta iyo qoraalada
Caqabadda waxay tahay qaabka loo maareynayo isticmaalka baraha bulshada ee shaqaalahaaga adiga oo aan jabinayn xuquuqdooda.
“Waxaad la socon kortaa cinwaanada ay baraha bulshada ku leeyihiin shaqaalahaaga ee gaysanaya wax aan anshax ahayn,” ayay tiri Ms Ghosh.
“Taa baddalkeedana waa in aad bartaa shaqaalaha muhiimadda lambarada sirta ah ee loo yaqaano (password) iyo waxyaabaha ay baraha bulshada ku baahiyaan.